China Isitolo esidayisa yonke impahla Sportswear Jacquard Indwangu And Scrunch Butt Leggings Seamless Women's Sexy Yoga Leggings Manufacturer and Supplier | Wenchang
Indwangu Yezemidlalo Isitolo esidayisa yonke impahla Izindwangu zeJacquard Futhi Ama-Leggings we-Butt Leggings angenamthungo we-Yoga Yoga yabesifazane
Ukushesha kombala okuphezulu
UMKHIQIZO WOMKHIQIZO I-Yoga Gqoka INDwangu
Into NO KWC21-4079
Izinto I-88% Polyester 12% Spandex
Isici Ukuphefumula / Ukuqina okuphezulu / Ikhwalithi ephezulu
Ukushesha Okuphakeme Kombala
Sebenzisa Izimpahla zokubhukuda / ingubo / ezemidlalo
Isitifiketi Ama-RSG / SGS
Ukuwasha: Izembatho zenziwe nge-fiber-based fiber-care fiber. Akufanelekile ukukhuhla izinto ezimagebhugebhu bese ugeza ngomshini wokuwasha. Izingubo kufanele zicwiliswe emanzini abandayo imizuzu engu-5-10. Sebenzisa okokuhlanza kasilika okhethekile ukuze uhlanganise impuphu yokuwasha enegwebu eliphansi noma ungathathi hlangothi. Hlikihla kancane ngensipho, (uma ugeza izindwangu ezincane ezinjengezikhafu zikasilika, i-shampoo nayo ingasetshenziswa kangcono), futhi izingubo zikasilika ezinemibala zingagezwa ziphindaphindwe emanzini ahlanzekile. ilanga, futhi akufanele lifudunyezwe ngomisi. Ngokuvamile, kufanele yomiswe endaweni epholile futhi enomoya. Ngoba imisebe ye-ultraviolet elangeni yenza kalula izindwangu zikasilika zibe phuzi, ziphele futhi ziguge. Ngakho-ke, ngemuva kokuwasha izingubo zikasilika, akukhuthazwa ukuyisonta ukuze ususe amanzi. Kufanele inyakaziswe ngobumnene, bese uhlangothi olubuyela emuva kufanele lwendlaleke emoyeni. Yiyeke yome ize yomile ngama-70% ngaphambi koku-ayina noma ukuqhaqhazela.
Uku-ayina: Ukusebenza kokulwa nemibimbi kwezingubo kubi kakhulu kunalokho kwefayibha yamakhemikhali, ngakho-ke kunesisho esithi "akukho mibimbi akusiyona usilika wangempela". Ngemuva kokuwashwa, izingubo zishwabene futhi zidinga uku-ayinwa ukuze ziqine, zihle futhi zihle. Lapho u-ayina, vumela izingubo zome kuze kube u-70% womile, bese ufafaza amanzi ngokulinganayo, linda imizuzu engu-3-5 ngaphambi koku-ayina, izinga lokushisa le-ironing kufanele lilawulwe ngaphansi kuka-150 ° C. Insimbi akufanele ithintwe ngqo ebusweni besilika ukugwema i-aurora.
Ukulondolozwa: Gcina izingubo. Kwezingubo zangaphansi ezincanyana, amahembe, amabhulukwe, iziketi, amaphijama, njll., Kufanele zigezwe futhi zi-ayinwe ngaphambi kokugcinwa. Okwezingubo zasekwindla nasebusika, amajakhethi, iHanfu, ne-cheongsam okungahambi kahle ukuhlukanisa nokuwasha, kufanele kuhlanzwe ngokuhlanza okomile kuze kube yilapho i-ayinawe ukuvikela isikhutha nenundu. Ngemuva koku-ayina, ingadlala indima nasekubulaleni inzalo nasekulawuleni izinambuzane. Ngasikhathi sinye, amabhokisi namakhabethe okugcina izingubo kufanele agcinwe ehlanzekile futhi evaliwe ngangokunokwenzeka ukuvimbela ukungcola kothuli.
Ngaphezu kokukhiqizwa kwe- i-yoga izindwangu, sinezimpahla zokubhukuda, amabhulukwe asebhishi, ezemidlalo, ukugqoka okugijimayo, ukugqoka i-ski, izindwangu zokugqoka izintaba.
Inkokhelo: imvamisa samukela i-T / T 30%
Ukupakisha: Ku roll ukupakisha ngamashubhu ngaphakathi nezikhwama zepulasitiki ngaphandle noma ngokusho kwesicelo samakhasimende.
I-LAB DIPI ithatha izinsuku ezi-2-4; UKUQALA kuthatha izinsuku ezingama-5-7. 10-15days yentuthuko yesampula.
Umbala wedayi ocacile: izinsuku eziyi-10-15.
Ukuphrinta design: izinsuku 5-10.
Uku-oda okuphuthumayo, kungashesha, sicela uthumele i-imeyili ukuze kuxoxiswane.
Kungani ukhetha thina / FEIMEI?
Sithenga intambo, sikhiqize indwangu ye-greige futhi sife noma siziphrinte ngokwethu, okwenza intengo yokuncintisana nokulethwa okusheshayo.
Langaphambilini Indwangu Yezemidlalo Isitolo esidayisa yonke impahla Izindwangu zeJacquard Futhi Ama-Leggings we-Butt Leggings angenamthungo we-Yoga Yoga yabesifazane
Olandelayo: I-Spandex Jacquard Knitted High Stretch Elasticity Indwangu Ephefumulayo Yengubo Ye-Yoga
phinda usebenzise indwangu
Indwangu Yebhulukwe Le-Yoga